Google गुगल एनालिटिक्स ड्यासबोर्ड जुन तपाईंलाई डराउँदैन | Martech Zone
गुगल एनालिटिक्स धेरै मार्केटरहरूको लागि डराउन सक्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो मार्केटिंग विभागहरूको लागि डाटा-आधारित निर्णयहरू कत्तिको महत्त्वपूर्ण छन्, तर हामी मध्ये धेरैलाई थाहा छैन कि कहाँ सुरु गर्ने। गुगल एनालिटिक्स विश्लेषणात्मक दिमागका बजारका लागि एक पावरहाउस उपकरण हो, तर हामी धेरैले महसुस गरेभन्दा बढी पहुँच योग्य हुन सक्दछ।
गुगल एनालिटिक्सबाट सुरू गर्दा, तपाईंले गर्नुपर्ने पहिलो चीज भनेको ब्रेकआउट हो विश्लेषण काट्ने आकारको सेक्सनमा। मार्केटिंग लक्ष्य, सेक्सन, वा समितिको आधारमा ड्यासबोर्डहरू सिर्जना गर्नुहोस्। इन्ट्रा-विभागीय सहयोग कुञ्जी हो, तर तपाईं आफ्नो गुगल एनालिटिक्स ड्यासबोर्डहरू अव्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्न हरेक चार्टलाई एकै ड्यासबोर्डमा आवश्यक परिकार गरेर।
गुगल एनालिटिक्स ड्यासबोर्डलाई प्रभावी ढंगले निर्माण गर्न तपाईले यो गर्नुपर्छ:
तपाइँको श्रोतालाई विचार गर्नुहोस् - के यो आन्तरिक रिपोर्टिंगको लागि ड्यासबोर्ड हो, तपाईंको मालिक वा तपाईंको ग्राहक? तपाईंले सम्भवतः मेट्रिक्स हेर्नुपर्नेछ जुन तपाईंको मालिकले भन्दा अधिक सानासाना तहमा ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ।
अव्यवस्थाबाट बच्नुहोस् - तपाईंको ड्यासबोर्डहरू राम्ररी व्यवस्थित गरेर जब तपाईंलाई यसको आवश्यकता हुन्छ सही चार्ट फेला पार्ने प्रयासको टाउकोको टाउको आफै बचत गर्नुहोस्। प्रत्येक ड्यासबोर्डमा छ देखि नौ चार्टहरू आदर्श छन्।
विषय द्वारा ड्यासबोर्डहरू निर्माण गर्नुहोस् - अव्यवस्थाबाट बच्नको लागि उत्तम तरिका भनेको तपाईंको ड्यासबोर्डहरूलाई समूह, समूह, उद्देश्य वा भूमिका द्वारा समूहबद्ध गर्नु हो। उदाहरण को लागी, तपाइँ दुबै SEO र SEM प्रयासहरुको निगरानी गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाई सम्भवतः हरेक प्रयासको लागि चार्टहरुलाई अलग ड्यासबोर्डमा राख्न चाहानुहुन्छ गडबडबाट बच्न। डाटा दृश्य पछाडि विचार यो छ कि तपाईं मानसिक तनाव कम गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसैले हामीमा प्रवृत्ति र अन्तर्दृष्टि आउँछ। विषयलाई आधार बनाएर ड्यासबोर्डमा चार्टहरू समूहबद्ध गर्दै त्यो उद्देश्यलाई समर्थन गर्दछ।
अब जब तपाइँको दिमागमा केहि दिशानिर्देशहरू छन्, यहाँ प्रत्येक Google एनालिटिक्स ड्यासबोर्डका लागि व्यावहारिक अनुप्रयोगहरू छन् (नोट: सबै ड्यासबोर्ड ग्राफिक्स Google एनालिटिक्स डेटाको हुन्। डाटाहीरो):
एड्वर्ड्स ड्यासबोर्ड - पीपीसी मार्केटरको लागि
यस ड्यासबोर्डको उद्देश्य तपाईंलाई कसरी प्रत्येक अभियान वा विज्ञापन समूह प्रदर्शन गरिरहेको छ, र साथै समग्र खर्च मोनिटर गर्न र अनुकूलनको लागि अवसरहरू पहिचान गर्न एक सिंहावलोकन दिन्छ। तपाईले तपाईको एड्वर्ड्स टेबुलमा अन्तहीन स्क्रोल गर्नुपर्दैनथ्यो। यस ड्यासबोर्डको विघटन तपाईको लक्ष्य र KPI हरू मा निर्भर गर्दछ, तर केहि विचार सुरू गर्न मेट्रिक्स हुन्:
मिति द्वारा खर्च
अभियान द्वारा रूपान्तरण
प्रति अधिग्रहण (सीपीए) लागत र अधिक समय खर्च
मेल खाने खोजी क्वेरी द्वारा रूपान्तरण
न्यूनतम प्रति अधिग्रहण (सीपीए)
सामग्री ड्यासबोर्ड - सामग्री मार्केटरको लागि
ब्लग बजारका रूपमा हाम्रो धेरै एसईओ प्रयासहरूको लागि रीढ़ बनेको छ। अक्सर जाने-मा नेतृत्व लिने जेन मेशिनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, ब्लगहरू तपाईंको धेरै ग्राहकहरूसँग पहिलो अन्तरक्रिया पनि हुन सक्छ र मुख्य रूपमा ब्रान्ड मान्यताका लागि प्रयोग गरिन्छ। तपाईको उद्देश्य जे भए पनि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो ड्यासबोर्डलाई उद्देश्यको साथ मनस्थितिमा सामग्रीको संलग्नता, लिड्स उत्पन्न र समग्र साइट ट्राफिकको डिजाइन गरेर बनाउनु भएको छ।
सुझाव गरिएको मेट्रिक्स:
साइटमा समय (ब्लग पोष्टद्वारा बिग्रिएको)
ब्लग पोष्टको ब्लग पोष्ट द्वारा सत्रहरु
ब्लग पोष्ट / ब्लग पोष्टको कोटी बाट साइन अप गर्नुहोस्
वेबिनार रेजिस्ट्रेन्टहरू (वा अन्य सामग्री लक्ष्यहरू)
स्रोत / पोष्ट द्वारा सत्रहरू
स्रोत / पोष्ट द्वारा बाउन्स दर
साइट रूपान्तरण ड्यासबोर्ड - बृद्धि ह्याकर को लागी
गृहपृष्ठ र ल्यान्डि pages पृष्ठहरू सम्भवतः रूपान्तरणको उद्देश्यले हुन् - जुन तपाईंको संगठनले रूपान्तरणलाई परिभाषित गर्दछ। तपाईं यी पृष्ठहरूको परीक्षण गर्न A / B हुनुपर्दछ, त्यसैले तपाईं यी परीक्षणहरूको आधारमा कसरी अवतरण पृष्ठहरू प्रदर्शन गर्दै छन् सावधानीपूर्वक मोनिटर गर्न आवश्यक छ। ग्रोथ-ह्याकि--दिमाग मार्केटरका लागि, रूपान्तरणहरू कुञ्जी हुन्। उच्च रूपान्तरण स्रोतहरू, पृष्ठ द्वारा रूपान्तरण दर, वा पृष्ठ / स्रोत द्वारा बाउन्स दर जस्ता चीजहरूमा फोकस गर्नुहोस्।
पृष्ठ / स्रोत अवतरण द्वारा सत्रहरू
ल्यान्डि land पृष्ठ / स्रोत द्वारा लक्ष्य पूरा
अवतरण पृष्ठ / स्रोत द्वारा रूपान्तरण दर
पृष्ठ / स्रोत अवतरण द्वारा बाउन्स दर
निश्चित गर्नुहोस् कुनै पनि A / B परीक्षण मिति द्वारा ध्यानपूर्वक ट्र्याक गर्नुहोस्। त्यस तरिकाले तपाईलाई वास्तवमै थाहा छ कि रूपान्तरण दरमा परिवर्तनको कारण के हो।
साइट मेट्रिक्स ड्यासबोर्ड - Geeky मार्केटर को लागी
यी मेट्रिक्स राम्रा प्राविधिक छन् तर तिनिहरूले तपाईंको साइटलाई अनुकूलन गर्नमा ठूलो फरक पार्न सक्छन्। अझ गहिरो खोजी गर्न, कसरी हेर्नुहोस् यी अधिक प्राविधिक मेट्रिक्स सामग्री वा सामाजिक मेट्रिक्सको साथ। उदाहरण को लागी, के तपाइँका सबै ट्विटर प्रयोगकर्ताहरू कुनै खास अवतरण पृष्ठमा मोबाइल मार्फत आउँछन्? यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि ल्यान्डि page पृष्ठ मोबाइलको लागि अनुकूलित छ।
समग्रमा साइट खर्च गरिएको समय
उच्च स्तर KPIs - मार्केटिंग को VP को लागी
यस ड्यासबोर्डको विचार मेट्रिक्समा आँखा राख्नु वास्तवमै सजिलो बनाउनु हो। नतिजाको रूपमा, तपाईले आफ्नो बजारका प्रयासहरूको स्वास्थ्यको दृष्टिकोण लिन तपाईको विभाग भित्र पाँच विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्दैन। यो सबै डाटा एकै ठाउँमा राख्नु भनेको मार्केटि performance प्रदर्शनमा हुने कुनै परिवर्तनहरू याद नहुने आश्वासन दिन्छ।
स्रोत / अभियान द्वारा नेतृत्व
ईमेल मार्केटिंग प्रदर्शन
समग्र फनेलको स्वास्थ्य
संगठनको बाँकी भागमा मार्केटिंगको मूल्य संचार गर्न, हामी सबै डाटामा निर्भर हुँदै गइरहेका छौं। सही डेटा स collect्कलन गर्न, कुञ्जी अन्तर्दृष्टिहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई हाम्रो संगठनमा फिर्ता सञ्चार गर्न हामी पर्याप्त विश्लेषणात्मक हुनु आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईं गुगल एनालिटिक्स जस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरणहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न, खास गरी जब तपाईं यसलाई ड्यासबोर्डहरू जस्ता थप उपभोग्य बाइट्समा भाँच्नुहुन्छ।
टैग: विज्ञापन दिन द्वारा खर्चविश्लेषणात्मक ड्यासबोर्डहरूउछाल दरस्रोत द्वारा बाउन्स दरसामग्री एनालिटिक्ससामग्री मेट्रिक्सरूपान्तरण एनालिटिक्सरूपान्तरण मेट्रिक्सरूपान्तरण दरअभियान द्वारा रूपान्तरणखोज क्वेरी द्वारा रूपान्तरणcpaडाटा नायकडाटारोडाटारो ड्यासबोर्ड्सलक्ष्य पूराGoogle विश्लेषणkpiअवतरण पृष्ठ विश्लेषिकीअवतरण पृष्ठ ड्यासबोर्डअवतरण पृष्ठ मेट्रिक्ससब भन्दा कम सीपीएमार्केटिंग केपीआईमोबाइल प्रयोगअपरेटिङ सिस्टमस्क्रीन संकल्पसत्रपोष्ट द्वारा सत्रहरूस्रोतबाट सत्रहरूसाइटमा समयप्रयोगकर्ता सत्रहरूवेबिनार रेजिष्ट्रेन्टहरू